အရက်သမားလား ၊ အစားကြူးတဲ့ ဘီလူးလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinion - Op-ed » အရက်သမားလား ၊ အစားကြူးတဲ့ ဘီလူးလား
အရက်သမားလား ၊ အစားကြူးတဲ့ ဘီလူးလား
Posted by etone on Jun 7, 2011 in Opinion - Op-ed, Short Story | 30 comments
ခွေးတွေ ၊ ကြောင်တွေ
လူတွေများ သူများ အသားလေး စားရလျှင် မြိန်ရေ ယှက်ရေ စားသောက်လိုက်ကြတာ … ယခင်ကဆို မစားကောင်းတဲ့အသား ၊ စားကောင်းတဲ့အသား … ခွဲသေးတယ်…။ အခုများတွေ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ပါမကျန် ချက်ပြုတ်စားသောက်နေကြတာ အတော့်ကို လွန်လွန်းပါပြီ … ။ ကိုယ့်လျှာရင်း မျက်မျက်လေး စားရဖို့ အတွက် အလကားနေရင်း သတ်ဖြတ်စားသောက်နေတာ …. လူစိတ်ပေါက်ပြီး ဘီလူးစိတ်ဝင်နေသလားတောင် ထင်မိပါရဲ့… ကျွန်မလည်း ကြားကြားချင်း အတော်လေး အံ့အားသင့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသွားတယ်… ။
” ဆရာ ဒီခွေးက ဘာခွေးလဲဟင် … အင်းခွေး အမျိုးစားထင်တယ် … ဆရာတို့ ပြန်လျှင် သူ့ကို ဒီမှာ ထားခဲ့တာလား …”
ကျွန်မတို့ ဆေးခန်းကို လာတဲ့ အဒေါ်ကြီးတယောက်က အပြင်ဘက် ထိုင်ခုံအောက်မှာ အိပ်နေတဲ့ အုန်းခွံရောင်ခွေးကို လက်ညှိုးထိုးပြီး မေးတာပါ… ။
“အဲ့ဒါဘာခွေးမှ မဟုတ်ဘူး လမ်းဘေးကခွေး … ၊ အရောင်က သူ့ဘာသာသူလှတာ … ။ ကျွန်မတို့ အဲ့ဒီခွေးကို မွေးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး ၊ ညတိုင် ဆေးခန်းပိတ်လျှင် သနားလို့ ထမင်းဆိုင်မှာ ၀ယ်ကျွေးနေကြမို့ ထမင်းတစ်ထုပ်စားရဖို့ စောင့်နေတာပါ … နောက်ခွေးထီးကြီးတကောင်လည်း ဆေးခန်းပိတ်ခါနီးလာစောင့်နေတတ်တယ် …. သူတို့ နှစ်ကောင်ကိုတော့ ညတိုင်း တနပ်စာ ကျွေးတယ်လို့ ပြောပြတော့ … သူက အံ့သြစွာနဲ့ … ဒီခွေးတွေ အတော်ကံကောင်းတယ်တဲ့လေ… ။
သူ့စကား အသွားလာကို နားထောင်ပြီး ကျွန်မစိတ်ထဲ ဇဝေဇ၀ါနဲ့ပေါ့… ခွေးတွေ ညတိုင်း တနပ်စားရတာ ကံကောင်းတယ် ဆိုတော့ အဲ့ဒီနားက လူတွေက ခွေးတကောင်ကျွေးဖို့တောင် စေတနာမရှိကြဘူးလား ၊ ဆင်းရဲ မွဲနေသလား တွေးမိပါတယ်… ။ ဘာလို့ ကံကောင်းတယ်ပြောရတာလဲလို့ ကျွန်မသိချင်စိတ်နဲ့ ရိုးရိုးပဲ ဒဲ့မေးမိပြန်တယ်… ။
သူကဆက်ပြောတယ်… ကံကောင်းတယ်ဆိုတာ သူတို့ ဘေးကင်းကင်းနေနိုင်ပြီး တနပ်စာ မှန်နေတာကို ဆိုလိုတာပါတဲ့ ။
စပ်စုတတ်တဲ့ ကျွန်မမှာ သိချင်စိတ်တွေ များပြီး … လမ်းပေါ်ကခွေးကို ဘေးမကင်းလို့ ဘယ်သူလိုက်ဖမ်းနေလို့လဲ ပြန်မေးတော့ ….။ ဒီလိုပါတဲ့ … ။
အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနေထိုင်ရာက ကျွန်မတို့ ဆေးခန်းနဲ့ ဆယ်အိမ် ၊ ဆယ့်ငါးအိမ့်ခန့် ဝေးတဲ့ တလမ်းထဲကပါ …။ သူမနေတဲ့ အိမ်ဘေးမှာ အရက်ဆိုင်ဖွင့်ထားပါတယ် … ။ သူမကလည်း ကျွန်မလို စပ်စုတတ်တဲ့သူမို့ စပ်စပ်စုစု အမြဲ လေ့လာနေတာဖြစ်ကြောင်း သူမနှင့် စကားပြောနေတုန်းမှာ ကျွန်မရိပ်စားမိခဲ့တယ်… ။
ညနေစောင်းနေကွယ်တာနဲ့ ….. စက်ဘီးလေးတွေနဲ့ အရက်ဆိုင်ထဲ ၀င်လာလိုက်ပြန်ထွက်နဲ့ မို့ သူမစိတ်ထဲ ထူးခြားနေတယ်ထင်မိတယ် ဆိုပဲ… အရက်ဆိုင် လူဝင်လူထွက်များတာ မဆန်းပါဘူး လို့ ကျွန်မက အရစ်ရှည်တော့ … ။ သူပြန်ပြောပြပြန်တယ်… ။ အရက်သောက်တဲ့လူက အအေးဆိုင်ထိုင်သလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့….အမြည်းကို တမြေ့မြေ့စားပြီး အရက်လေး လျှာဖျားပေါ် တင်လိုက် အမြည်းစားလိုက် စိမ်ပြေနပေလုပ်တာပါတဲ့ … ။ ပြောမယ်ဆိုလျှင် အချိန်အတော်ကြာယူပြီးမှ အရက်သောက်လေ့ရှိတယ်ဆိုပဲ … ။ အ ခုလာတဲ့ စက်ဘီးလေးတွေနဲ့ လူတွေက ခဏလေးဝင်လာလိုက် … ငါးမိနစ်လောက်ဆို ပြန်ထွက်သွားလိုက်နဲ့ … တကယ့်ကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့ သူမစောင့်ကြည့်ခဲ့တယ် … တချို့ လူတွေဆို လမ်းလျှောက်လာတာတောင်ရှိပါသေးသတဲ့… ။ ခဏလေးလာပြီး ပြန်ထွက်သွားတဲ့ လူတွေက လမ်းမှာ လေလွင့်နေတဲ့ ခွေးတွေ ၊ ကြောင်တွေကို သတ်ပြီး အရက်ဆိုင်ကို ပြန်သွင်းတာပါတဲ့… ။ အရက်သမားတွေ အတွက် ခွေးသား ၊ ကြောင်သားဟာ အလွန်စားကောင်းတယ်ဆိုပဲ … ။ ကောက်ဈေး ခွေးတကောင်မှာ တပိတ်သာ ၈၀၀ ကျပ်ခန့်ဖြစ်ပြီး ၊ ခွေးတကောင်လုံးဆိုလျှင် ၄ပိသာခန့်ကနေ… အလွန်ဆုံး ၆ပိသာခန့်အထိ အလေးစီးပါတယ်တဲ့ … ။ ကြောင်တကောင်သွင်းဈေးမှာ ကောင်လုံးပြတ် ၃၀၀၀ ကနေ ၄၀၀၀ အထိ အစားစားရှိပါတယ်တဲ့ … ။ ခွေးသားကို ဆေးဖက်ဝင်တယ်လို့ ဘယ်အရက်သမားက မူးပြီး ပြောမိမှန်းမသိဘူး အဲ့ဒီနားက ဖျားတဲ့လူတွေ ၊ နာတာရှည်သမားတွေ ၀ယ်စားကြပါတယ်တဲ့ … ဒါကြောင့်လည်း အဲ့ဒီဟင်းကို ဟောင်ကောင်သား ဟင်း… ၊ ကျန်းမာရေး အသား ဟင်း ၊ စသည်ဖြင့် အရက်သမား ခေါ်တွင်ကြပါတယ်… ။ ဟင်းတပွဲ ၂တုံးလောက်ပါတာကို ၁၀၀ လောက်နဲ့ ရောင်းနိုင်ပါတယ်တဲ့ … ။ စပ်စပ်စုစု ကျွန်မက ချက်ပြုတ်နည်းပါမေးတော့….. သုံးမျိုး ချက်စားပါသတဲ့ … ကင်လို့လည်းရတယ်… ၊ ကြော်လို့လည်းရတယ်… ၊ ဆီပြန်လည်း ချက်လို့ရပါသတဲ့… ။ ကြောင်သားကိုတော့ တကောင်လုံး သီတံနဲ့ ထိုးကင်ပြီး ရောင်းတာပါတဲ့… ။ လမ်းပေါ်က ခွေးတွေဆို နေစရာမရှိအောင်ပဲ တွေ့တဲ့နေရာမှာ ဖမ်းကြပါတယ် ပြီးတော့ အရက်ဆိုင်မှာ လာသွင်းကြပါသတဲ့… ခွေးတကောင် ကိုသုံးထောင်ကျော်လောက်ရတော့ …. အလကား အလုပ်မရှိလျှင် ခွေးဖမ်းကြတယ်ပေါ့… ။ ငရဲကြီးတာတွေ သေးတာတွေလည်း မတွေးတတ်တော့ဘူး ထင်ပါရဲ့ … ။ ကြောင်ဆိုလျှင်လည်း အိမ်မွေးကြောင်တောင် လမ်းမလျှောက်သွားနေလို့ကတော့ နှာခေါင်းကို ကြမ်းနဲ့ ပွတ်တိုက်သတ်ခံရပြီး အရက်ဆိုင် ရောက်ရရှာပါတယ်… ။ ကျွန်မကြားရတဲ့ သတင်းက ရင်နာစရာကောင်းပါတယ် … ကျွန်မတို့ ချစ်လို့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အဖြစ် မွေးတဲ့ ကြောင်လေးတွေကို စားတဲ့လူကလည်း စားရက်သလို … သတ်ရောင်းတဲ့ လူကလည်းသတ်ရောင်းရက်ပါတယ်… ။ ခွေးတွေခမျာလည်း အလေလွင့်ဘ၀တောင် ကောင်းကောင်းမနေရရှာပဲ … ဒီလို သတ်ဖြတ်တဲ့လူတွေရဲ့ဒဏ်ခံနေကြရတာပါ … ။ တယ်ဆို ဈေးမှာ ၀ယ်လို့လွယ်တဲ့ အသားမျိုးပဲ အရက်ဆိုင်က ရောင်းသင့်တာပါ … ။ သတ်သမျှကောက်နေတော့လည်း ဒီလူတွေ ပိုက်ဆံရမှန်းသိလို့ အလကားနေရင်း လိုက်ဖမ်းနေကြတာပေါ့ … ။ အရက်ဆိုင်မို့လို့ အရက်သမားကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ လူတွေ အဖတ်မလုပ်ပေမဲ့ … ရပ်ကွက်လူကြီးတွေ ၊ နယ်မြေခံရဲတွေက ဒီလို တိရိစ္ဆာန်ညှင်းပန်း သတ်ဖြတ်မှူမျိုးကို တားဆီးသင့်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်… ။ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း သိနေကြပြီး ဘာမှ တားဆီးမှူမလုပ်နိုင်ကြတာမို့ ဒီလို အလုပ်တွေ ဆက်လုပ်ကိုင်နေပါသေးတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်း … အဒေါ်ကြီးပြောပြပြီး သိလို့ ပြန်ပြောပြကာ၊ စိတ်မကောင်းဖြစ်ယုံက လွဲလို့ ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူးလေ … ။ ။
အခုတစ်လော အစားသောက်ကပဲ ရှားပါးလာသလား လူတွေကပဲ အစားကြူးလာသလားတော့ မပြောတက်ဘူး ခွေးတွေ ကြောင်တွေကို အခုလိုရောင်းစားတာ သတ်စားတာတွေ ခဏခဏ ကြားနေရတယ်နော် …
အမှိုက်ပုံက ကြွက်ကြီးတွေလည်း ဖမ်းရောင်းတာ မြင်ဖူးတယ်။
အမှိုက်ပုံတွင်မကဘူး ရပ်ကွက်ထဲက ကြွက်တွေလည်း ညဘက် သန်းခေါင်ကျော်နဲ့ ၂နာရီကြားမှာ လိုက်ဖမ်းတယ် … ဖမ်းတဲ့ အခါကြွက်တကောင်ကိုကြိုးနဲ့ ချည်ထားပြီး ဒုတ်နဲ့ ထိုးတယ်…အဲ့ဒီအခါ ကြွက်က နာလွန်းလို့ အသံ တိုးတိုးနဲ့ ညည်းရှာတယ်… ။ သူ့အသံကိုကြားပြီး တခြား ကြွက်တွေ ထွက်လာပါတယ်…အဲ့ဒီအချိန်မှာ လေးဂွနဲ့ ပစ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖိနပ်နဲ့ ရိုက်ဖမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီး ဖမ်းသွားပါတယ်… ။ စိတ်ဝင်စားလွန်းလို့ ချောင်းကြည့်ကြည့်နေခဲ့တာလေ … ။ သနားသာ သနားတာ ကိုယ်လည်း တားလို့မရဘူး …. ။ ကြွက်ဖမ်းသမားရုပ်တွေက ညဘက်မှာ ခက်ထန်ပြီး ကြောက်ဖို့ကောင်းလို့ … သူတို့ဖမ်းတာ ကြည့်တာတောင် ချောင်းကြည့်ရတာ … ။
US မှာ ရော ခွေးသား ကြောင်သား ဘယ်ဈေးပေါက်လဲ။
ဖစ်မှဖစ်ရ‌လေဗျာ ………အဲဒီ‌လောက်‌တောင်အေ ခြ အ‌နေဆိုး‌နေ ကြ ပီလား၊၊ စိတ်‌လေပါတယ်၊၊BE ဆိုင် ‌တွေမှာမလား၊၊
မန်းတလေး မြို့ ရဲ့ မြို့ သစ်ဘက်မှာ မနက်အစောပိုင်း ၃ နာရီ ၄ နာရီ ခန့် ဆိုလျှင် မြင်းလှည်းတစ်စီး နှင့် ရပ်ကွက် တကာ လှည့် ခွေးလိုက်ဖမ်းနေတဲ့ အဖွဲ့ ရှိပါတယ် ။ ခွေး က ယဉ်ရင် ဒီအတိုင်း အရှင် ဖမ်းပါတယ် ။ သို့ မဟုတ် အမဲတုံး ပစ်ကျွေး ပြီး အလောင်းကောက်ပါတယ် ။ ပြီးရင် ဘယ်ရောက်လဲ တော့ မသိပါဘူး ။ နန်းရှေ့ ဈေးထဲ မှာ တောကြောင်သား ဆိုပြီး ဝယ်လို့ ရကြောင်း သိရပါတယ် ။ မြို့ သစ် မနော်ဟရီ လမ်းပေါ်ရှိ ဘီအီးဆိုင်၊အရက်ဆိုင်လေး များ မှာ လည်း တောကြောင်သားချက် ဆိုပြီ ရောင်းနေကြတာ ကိုလည်း တွေ့ ဖူးပါတယ် ။ ထို့ အပြင် မန်းတလေးမြို့ ၏ hot food မှာ ၃ခါအော်တဲ့ ကြွက်ဝမ်းဖြူ တဲ့ ။ ဘောစိကြီးများ စားကြပါသတဲ့ ။ တစ်ကောင် စားရဖို့ ကို သိန်းချီ ပေးရတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ် ။ ကြွက်ကို စားတော့မယ် ဆိုရင် ၃ ခါ အော်တယ် ဆိုလား ။ ကာမအား အတွက် လွန်စွာ တိုးပွားစေတယ် ဆိုပြီး စားကြပါသတဲ့ ။ အဆိုပါ ကြွက်အကြောင်း သိရှိသူ ရွာသူ ရွာသား များ အနေဖြင့် ဆက်လက်ရေးသားပေးလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ် ဗျာ ။
၃ခါအော်တဲ့ ကြွက်ဝမ်းဖြူ ဆိုတာ မွေးကင်းစကြွက်ပေါက်စလေးကိုအရှင်လတ်လတ်စားတာပါ.. .ကြွက်အရှင်ကိုတူနဲ.ညှပ်တဲ့အခါတစ်ခါအော်တယ်.. ..အချဉ်နဲ့တို.တဲ.အခါမှာတစ်ခါအော်တယ်…. ..ပါးစပ်ထဲကိုထည်.တဲ.အခါတစ်ခါအော်တယ်.. .တရုပ်တွေကတော့…ဒါ.ကောင်းတယ်ဆိုပြီး စားကြပါတယ်…
အဲဒါကြောင့် ဘုံကျောင်း လူကြီးတွေက သတ်သတ်လွတ် စားခိုင်းကြတာ ဖြစ်မယ်
တရုတ်ဘုံကျောင်းမှာ အလှူရှိတယ် ဆိုရင် သတ်သတ်လွတ်ပဲ စားရတယ်။
တစ်ကယ်ကြီးလား … ဘုရားရေ … လူတွေ တစ်ကယ်ပဲ ဆိုးရွား ခက်ထန်လာကြပြီနော် …
windtalker ရေ ဟိုအရင်တုန်းကတော့ မြင်းလှည်းနဲ့ လိုက်ဖမ်းတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ် မေထက်တို့အိမ်ကခွေးလေးတောင်ပါသွားသေးတယ်.
တောက် !!!!……ဟိုကြောင်လေးက ကစ်နေတာပဲ….။
ဗာလချောင် လုပ်ပြီး မြည်းလိုက်ရရင်တော့ ။
သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇတ်ဆိုတော့ သွားပြီး တားလို့ မရဘူး။
မြန်မာမှာ ခွေးသား မစားလို့ ခွေးတွေ ပေါတယ် ခွေးရူးရောဂါဖြစ်တယ် လို့ ပြောနေကြတာ.. အခုတော့ ခွေးလည်း ကျီးလန့်စာ စားနေရပြီပေါ့။
တရားဝင် လူကြိုက်များတဲ့ အရာ မဟုတ်တော့ ၃၀၀၀ လောက်ပဲ ရတယ် ဆိုတော့ နာတာပေါ့.. သတ်ရောင်းမဲ့ အတူတူ ကိုရီးယားကိုတင်ပို့ ရောင်းရင် ပိုပြီး ဈေးကောင်းရလေမလားလို့.. တွေးမိတယ်။
ခွေးတွေတော့ ဒီလိုသာဆို မချောင်လောက်ဘူးနော်။
ကျွန်မတို့အိမ်အနောက်ဘက်ကလမ်းထဲမှာ မူလတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပြီး ကျောင်းစောင့်တစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ် …. အရက်သမားကြီး … အိမ်မှာ ကြောင်သားအမိ ၅ ကောင်ရှိတယ် … အဲဒီလူကြီးက အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ကြောင်လေးတွေကို တစ်ပတ်အတွင်း တစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင်ဖမ်းပြီး သတ်စားပစ်လိုက်တယ် … အိမ်နီးနားချင်းက ကြောင်တွေပါ အကုန်ကုန်သွားပြီး ရပ်ကွက်ရုံးကိုသွားတိုင်တော့မှ အဲဒီလူကြီးကို နှင်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ် …
အခုထိတွေးမိတိုင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတုန်းပဲ …
တလောက ဒီဗွီဘီ မှာ မူလတန်း ကလေး တယောက်ကို ကျောင်းက ခွေးတွေ ၀ိုင်းကိုက်လို့ ဆေးရုံ တင်လိုက်ရတယ် ဆိုပြီး သတင်းကြားလိုက်တယ်။ အဲဒီ နောက်ပိုင်း ခွေးတွေ ရှင်းကြတယ်။ ဒီနည်းနဲ့လည်း ရှင်းတယ် ထင်ပါရဲ့။
ဒီ ခွေးလေခွေးလွင့် ပိုင်ရှင်မရှိ လေလွင့် နေတဲ့ ခွေးတွေ လျှော့နည်းသွားတော့ လဲ မြို့ အနေနဲ့ တမျိုးသန့်ရှင်းသွားတာပေါ့။ (ဒီခွေးလေခွေးလွင့် တွေ ကို ဘယ်သူမှ တာဝန်မယူနိုင်တဲ့ အတွတ်)
အစားအသောက် အနေနဲ့ ကျန်းမာရေးမထိခိုက်ဘူးဆိုရင် စားစရာ တမျိုး တိုးသွားတာပေါ့။
သူများအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေဆိုရင် တော့ ဒါခိုးယူသတ်ဖြတ်တာ ဖြစ်သွားပြီ။ ဒါတော့ မကောင်းဘူး
ဘာသာရေး နဲ့ ကြည့်မယ်ဆို ရင်တော့ သနားပါတယ်….ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်
မြန်မာပြည်က.. အရက်ဆိုင်ကလူတွေကို.. ကြွက်တွေစားရင်.. အရက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့.. အသဲခြောက်ရောဂါသက်သာတယ်. သတင်း..ဖြန့်ပေး.ပြောပေးကြပါလားဟင်င်င်..
ကြွက်မှ.. အိမ်ကြွက်(အပြေးသန်တဲ့ကောင်)စားရင်လို့.. ပြောပေးနော…။
ကြွက်နီတာရဲလေးတွေ.. အရက်နဲ့… အကောင်လိုက်ဝါးစားရင်.. အရမ်းစိမ့်တယ်လဲပြောပေးကြပါ..။
ဘာပဲပြောပြော.. ခွေးလေခွေးလွင့်တွေ.. စားကြတဲ့အကျင့်ကိုတော့… နှစ်ထောင်းအားရရှိလှတယ်..။
(မှတ်ချက်။ ။ ငယ်စဉ်က ခွေးလေခွေးလွင့်ကိုက်ခံရဖူးပြီး.. ခွေးတင်ကြွေးထားသူမှ.. မိမိမသိ.. တာဝန်မယူလုပ်ခံရဖူးသူ၏ “သာဓုအမှန်”ဖြစ်ပါကြောင်း..)
စည်ပင်သာယာ က တကူးတက လိုက်မရှင်ရဘူးပေါ့.. မလေးရှာမှာ ကျီးကန်းတွေ သေနတ်နဲ့ လိုက်ပစ်နေတာတွေ့တော့ မေးကြည့်တာ မန်ယူ ဘောလုံးအသင်း ခြေစမ်းပွဲ ကလဲရှိ နိင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေ လာရင် သူတို့ ကြောက်တဲ့ကျီကန်း ၊ ခွေးတွေ လိုက်ဖမ်းတယ် နေ့တိုင်းပဲ….သူတို့ကတော့ သူတို့ ဘာသာနဲ့ဟုတ်နေတာပဲ ကို့နိင်ငံကြတော့ သတ္တ၀ါတွေကို သနားတက်တာကိုး.. ခွေးလေခွေးလွင့်တွေ ရှင်းသွားပြီးရင် မွေးချင်သပ ဆို ကို့တရိစ္ဆာန်ကိုယ် တာဝန်ယူမွေးကြပေတော့..ကျွန်တော်တို့ အိမ်က ဘုန်ကြီးကျောင်း ၃ကျောင်းကြားမှာ .. တော်သလင်းမရောက်ခင် ဇာတ်လမ်းထွင်နေကြတာ မြင်မကောင်းဘူး.. ဟိုတနေ့က အန်ကယ်ကြီး (မမလေး မောင်ခိုးမယ်…..) ပို့စ်မှာ သန်လျှင်ကျောက်တန်း လမ်းမှာ အတိုက် ခံထားတဲ့ခွေတကောင် ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့.. ဆိုတော့ ကားနဲ့တိုက်တာ ပြဿနာ မရှိပေမဲ့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ကြတော့ လူ့အသက်ပါ ရန်ရှာနေတယ်.. တိုင်းပြည် သာယာလှပဖို့ ဆုတောင်းလို့ မကောင်းပေမဲ့ စားချင်တဲ့သူတွေစားတာ စားကြပါစေ..သတ္တ၀ါ ဆိုတာကလဲ လူချွတ် မှ ကျွတ်တာဆို..ရောဂါပိုးမရှိဖို့တော့ လိုမယ်.. ကိုရီးယားက ခွေးတွေကို ရှယ်မွေးပြီးမှ စားတာ တခြား တရိစ္ဆာန်တွေလို ဆေးစစ်ပြီးမှ စားကြတာ
ကျုပ်မစားဘူးတဲ့ အသားက ခပ်ရှားရှားရယ်
ကျုပ်ကံကောင်းဘို့အတွက် ဘော်ဒါတွေက ခွေးတစ်ကောင်ထုပြီး
နိုင်ငံအများမှာ တော့ ခွေးလေခွေးလွင့် တွေ ဖမ်းပြီး ဂေဟာတွေပို့ ရက်အကန့်အသတ် အတွင်းမွေး ချင်တဲ့ သူတွေဂေဟာ မှာသွားကြည့် အိမ်ခေါ်မွေး မွေးမဲ့သူမရှိတဲ့ ခွေးကတော့ အချိန်တန် သုတ်သင်ခံ ရ တာတော့သိ တယ် ။ ခွေးအလောင်းကို ဘယ်လို စီစဉ် လဲတော့ မသိတော့ဘူး ။ လက်ရှိထိုင်ဝမ် သမတ မွေးထားတဲ့ ခွေးက လည်း ဂေဟာက ကောက်ယူ မွေးစားထားတာပဲ ။ ခွေးမှာပိုင်ရှင်ရှိရင် chip နဲ့လည်ပတ်တပ် ရတယ် ။်ဒါကြောင့် လမ်းတွေပေါ်မှာ ခွေးလေခွေးလွင့် တွေမရှိဘူး ပေါ့ ။ ခွေးကိုက်ခံရဖို့ ခွေးမစင် မတော်တဆ တက်နင်းဖို့လဲမရှိ ဘူးပေါ့ ။
အော် ခွေးမသောက်တဲ့အရည်တွေသောက်ပြီး အဲဒီအရည်မသောက်တဲ့ ခွေးကို အရည်သောက်တဲ့သူတွေက စားကြတယ်..
ခွေးထက်မိုက်တယ်ဆိုတာ အဲဒါပြောတာပေါ့ ခွေးထက်မိုက်လို.ခွေးကိုသတ်စားတာပေါ့
အသားကင်လေး အချက်လေး တို့ချင်မြည်းချင်ကြတာ မတတ်နိုင်တဲ့ သူတွေမှာ
မကောင်း ကျောင်းပို့ ထဲမှာ ခွေးလည်းပါတယ်။
ဆူး တို့ နေတဲ့ ရပ်ကွက်က အရင်က တောကြီး နောက်တော့ စီမံကိန်း လုပ်ပြီး အိမ်တွေဆောက်တယ်။ လူတွေ လာကြည့်တော့ အိမ်တွေနားမှာ ခွေးတွေများလို့ မကြိုက်ကြတာနဲ့.. စီမံကိန်း တာဝန်ရှိသူက ခွေးလည်း သတ်ချင်တာနဲ့ ကွန်တိန်နာ ကားနဲ့ အရှင်ဖမ်းပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းပို့လိုက်တယ် ပြောတယ်။ အခုတော့ ဘာခွေးမှ မရှိဘူး အေးချမ်းသွားတယ်။
ဈေးချိုတာ စားကြတယ်သဘောလည်းပါမှာပါ..။ အရက်မူးနေတော့ စားသင့်မစားသင့် မတွက်တော့ဘူးလေ….
ကြွက်ပေါက်စလေးတွေကို တရုတ်လူမျိုးတွေ ငှက်ပျောသီးထဲမြှုတ်ပြီးစားကြတဲ့အကြောင်းဖတ်ဖူးပါတယ်။
သူတို့တရုတ်ပြည်သွားတုန်းက အကြောင်းေ၇းထားတာထင်တယ် ……………
နောက်တခုက စားပွဲဝိုင်းကြီးအလည်မှာ အပေါက်ဖေါက်ပြီး မျောက်အရှင်ရဲ့ခေါင်းကိုစွပ်ထားတယ်
ပြီးမှ ..အဲဒီမျောက်ကို ဓါးထက်ထက်လေးနဲ့ ဦးနှောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်း တလွှာချင်းလွှာစားကြရတယ်တဲ့
မျောက်ကလေးခမျာ .. မျက်လုံးလေးကလယ်ကလယ် နဲ့တဲ့ ….။ ရှာဖတ်ကြည့်ကြပါအုံး ..။
ပြောရရင်တော့ ၀ဋ်ကြွေးကြမ္မာမပြေးသာ ကိုယ်ပြုသမျှကိုယ်ခံတဲ့